Hlola i-Netherlands - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eThe Netherlands.
Okufanele ukwenze The Netherlands.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-The Netherlands
Bukela ividiyo ekhuluma ngeThe Netherlands
Hlola i-Netherlands izwe laseYurophu, elilingana nomngcele Germany empumalanga, iBelgium ngaseningizimu, futhi France ku I-Caribbean njengoba insimu yamaDashi iSint Maarten inemingcele yensimu yaseFrance iSanta-Martin. Abantu, ulimi namasiko aseNetherlands kubhekiselwa kubo ngokuthi "amaDashi".
Inabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-17 endaweni eyi-41,543km² kuphela, izwe elinabantu abaningi elinemali yalo enhle Amsterdam ngokuba elinye lamadolobha amaningi athakazelayo. Lapho sekungamandla amakhulu asolwandle, lesi sizwe esincane sicebisana ngengcebo yamagugu amasiko futhi saziwa ngabadwebi baso, izindiza zomoya, amakhethini namazwe acwebile ngokudumile. Izwe laseYurophu lwanamuhla namuhla, lilondoloze umlingiswa walo owaziwa kakhulu emazweni omhlaba futhi laziwa ngomqondo walo wenkululeko. Njengelungu elisungule i-EU ne-NATO, futhi elibambe eNkantolo Yezobulungiswa e-The Hague, iNetherlands isenhlizweni yokubambisana kwamazwe omhlaba. Usayizi wayo omncane, isimo sokwamukela abahambi nezihambi eziningi zikwenza kube okuyingqayizivele futhi kulula ukuthola ukutholakala futhi ukwengeza okuhle kunoma yiluphi uhambo lwaseYurophu.
INetherlands iyinkosi yezomthethosisekelo. lokho kusho ukuthi inenkosi enamandla amancane, ehlukaniswe ngokuphathwa yaba izifundazwe ze-12 (provincies). Yize iNetherlands iyizwe elincane, lezi zifundazwe zihlukahlukene kakhulu futhi zinokuhlukahluka okuningi ngamasiko nezilimi. Zingahlukaniswa ngezigaba ezine:
I-Western Netherlands (Flevoland, North Holland, South Holland, Utrecht)
Okuvame ukubizwa ngeRandstad, lena yinhliziyo yeNetherlands ngamadolobha ayo amakhulu amane kanye nemaphandleni aseDashi ajwayelekile.
I-North Netherlands (Drenthe, Friesland, Groningen)
Indawo enabantu abaningi kunazo zonke, iningi labo elingagxiliwe, kepha ethandwa ngabantu bendawo. Iziqhingi zaseNtshonalanga Frisian ziyindawo enhle yokuphumula izinsuku ezimbalwa, njengoba kunjalo namaLwandle aseFrisian. Idolobhakazi elinempilo laseGroningen nalo likufanele ukuvakashelwa.
I-Eastern Netherlands (Gelderland, Overijssel)
Ikhaya lasepaki enkulu kunazo zonke yeNetherlands, iHoge Veluwe National Park, kanye neHanzesteden enhle, amadolobha ayisikhombisa ezokuxhumana asemfuleni i-IJssel River onesikhungo somlando sendabuko, njengeZutphen, Zwolle, Isburg, phakathi kwamanye.
I-Southern Netherlands (Limburg, North Brabant, Zeeland)
Ihlukaniswe kwabanye ngomlando wayo wamaKatolika, imikhosi yomkhosi womkhosi kanye “nendlela yokuphila” yaseBurundi.
INetherlands inamadolobha amaningi namadolobha athakazelayo kubahambi. Ngezansi kweziyisishiyagalolunye kweziphawuleka kakhulu:
Amsterdam - izakhiwo ezihehayo, imisele ethandekayo (grachten), iminyuziyamu kanye nezimo zengqondo zokukhululeka
I-Arnhem - idolobha eliluhlaza okotshani eRhini: Sonsbeek, Veluwe naseMeinerswijk, izindawo ezindala nezindawo zokuhlala, imicimbi yamasiko
I-Delft - idolobhana lomlando elingaxutshwe nalutho oludumile lomhlaba oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe
I-Groningen - idolobha labafundi elinomoya opholile futhi nobusuku kuze kube yilapho ilanga liphuma
The Hague - inhloko-dolobha yokwahlulela yomhlaba, isihlalo sikahulumeni nomndeni wasebukhosini
I-Eindhoven - idolobha lesihlanu ngobukhulu, ubuchopho be-europe, okuncane kakhulu izivakashi ukuze uzizwe ngokoqobo isiko lamaDashi
I-Maastricht - idolobha eliphakathi elivikelwe elibonisa isiko elihlukile, isitayela nokwakhiwa kwakwaseningizimu
INijmegen - idolobha elidala kakhulu kuleli, elidume ngemashi, ezombusazwe ezinamaphiko kwesokunxele kanye nenani elikhulu labafundi
Rotterdam - izakhiwo zesimanjemanje, impilo enhle yasebusuku, indawo ebonakalayo yobuciko kanye nechweba elikhulu kunawo wonke laseYurophu
I-Utrecht - isikhungo esingumlando, izitolo zakudala kanye neRietveld-Schröder House
I-Efteling - ipaki yengqikimba edumile enezakhi ze-fairytale ezinjenge-elves nezincane
IGiethoorn - idolobhana elincane elinokwakhiwa kwendabuko okuhle kanye nemisele endaweni yemigwaqo
IHoge Veluwe National Park - ipaki likazwelonke elikhulu kunawo wonke elinendawo yokushisa, izindunduma zesihlabathi kanye namahlathi
IDwingelderveld National Park - kulondolozwa amahektha angama-3700 eendaweni ezinamanzi amakhulu obushushu obumanzi eYurophu.
I-Keukenhof - ngaphezu kwezivakashi ze-800,000 zibona lezi zinkundla ezinkulu zezimbali njalo entwasahlobo
I-Kinderdijk - lezi zivunguvungu zomoya zibonisa isimo sendawo yamaDashi esimilo kuyo yonke inkazimulo yayo
ISchokland - isiqhingi esidala safuduswa e-1859, okuyindawo yokuhlala ngokulondolozwa komuzi osezingeni eliphezulu
ISouth Limburg - izindawo ezinotshani obunamagquma, amadolobhana amahle, izinqaba kanye nezihlahla zezithelo
I-Texel - isiqhingi esikhulu kunazo zonke esilungele ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba, ukubhukuda nokugibela amahhashi
I-Waterland kanye neZaan Region - amadolobhana aseHolland ajwayelekile anamawashi, izindlu zokhuni, ama-windmill namaZaanse Schans
IZaanse Schans - imnyuziyamu evulekile yomoya enezindlu zomoya zaseDashi nezindlu zaseZaan
Ingxenye yezwe eseningizimu yezwe yayiyingxenye yoMbuso WaseRoma Oyingcwele yaze yatholakala lapho ama-Burgundians ewuthola. Ekupheleni kweNkathi Ephakathi, yaba yifa laseSpain (kanye nalokho manje okuyiBelgium). Kancane okusinda kule nkathi, ngaphandle kwezindawo ezimbalwa zomlando zamadolobha, nezinqaba ezimbalwa.
Abahambi abambalwa impela bavakashela eNetherlands ukujabulela isimo sabo esivumelana nokubekezelela: ubufebe bunqunyulwa buthengwe kuphela labo bafebe ababhaliswe endaweni yokuqopha evunyelwe. Akukho emthethweni ukuthi abathengisa ngocansi bacele abathengi emigwaqweni futhi izifebe zivame kakhulu enhlokodolobha i-Amsterdam, lapho kutholakala khona izifunda ezibomvu, noma nje izivakashi zivakasha njengezindawo zokuvakasha. Ezindaweni eziningi zasemakhaya, ubufebe cishe abukho. Izitolo zocansi, imibukiso yezocansi, iminyuziyamu yezocansi neminyuziyamu yezidakamizwa nayo ithandwa kakhulu phakathi kwabavakashi. Ukuthengiswa, ukutholakala, kanye nokusetshenziswa kwenani elincane le-cannabis, ngenkathi ubuchwepheshe kungakungekho emthethweni, kubekezelelwa ngokusemthethweni, kepha ama-coffeshops ancike emikhawulweni eyandayo. Izidakamizwa ezinzima (isib. I-ecstasy noma i-cocaine) zihlala zingekho emthethweni emcabangweni nasekuziqhelweni. Esimweni esifanayo esivulekile somqondo wenkolelo yamaDashi ebhekelwa ebungqingili, umshado wezitabane ubhaliswa ngokusemthethweni. Futhi umkhuba we-euthanasia uvunyelwe ngokusemthethweni ngaphansi kwezimo eziqinile.
I-geography yeNetherlands ilawulwa yizici zamanzi. Izwe liwela umfula ngemifula, ngemisele nangamachibi, futhi ulwandle alukaze lube kude. Ugu olusentshonalanga lweNetherlands lungenye yamabhishi amahle kakhulu oNyakatho Olwandle angatholakala, ukuheha izinkulungwane uma kungenjalo izigidi zabantu njalo ngonyaka, phakathi kwabo kunamaJalimane amaningi.
INetherlands inesimo sezulu esishisayo sasemanzini, okusho ukuthi ihlobo ngokuvamile lipholile futhi ubusika buhlala buthambile.
Schiphol Airport, eduze Amsterdam, iyisizinda saseYurophu, nangemva kwalokho London, Paris, Futhi Frankfurt ngobukhulu eYurophu. Yisikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke ezweni, futhi intshisekelo uqobo lwayo, ngokuba ngamamitha we-4 ngezansi asho izinga lolwandle (igama lisuselwa "emgodini wemikhumbi" selokhu iSchiphol yakhiwe echibini elikhanyayo). Abahambi bangandiza kalula bangene ezindaweni eziningi zomhlaba bese baxhumana ne-KLM yezindiza enkulu yaseDutch.
Ezinye zezindiza zaphesheya kwezilwandle yi-Eindhoven Airport, Isikhumulo sezindiza iMaastricht / Aachen, iRotterdam - Isikhumulo sezindiza i-Hague, kanye ne-Groningen-Eelde Airport.
Imoto iyindlela enhle yokuhlola emaphandleni, ikakhulukazi izindawo engaxhunyiwe ngojantshi, njengeVeluwe, izingxenye zeziqhingi zeZeeland nezine North North. Inethiwekhi yezimoto ibanzi, noma isetshenziswa kakhulu. I-Congestion ngesikhathi sehora eliphakeme kuyinto evamile futhi ingagwenywa kangcono. Imigwaqo isayinwe kahle. Ukushayela kungakwesokunene. Lapho ushayela emadolobheni, hlala ubeka kuqala abashayeli bamabhayisekili lapho ujikisa umgwaqo umjikelezo.
Ulimi lukazwelonke eNetherlands luyisiDashi.
Ngokusemthethweni, iNetherlands iyazilimi ezimbili, njengoba nesiFulenisi siwulimi olusemthethweni. IFrisian ilulimi lwesibili olusondele kakhulu esiNgisini
"Bonke bakhuluma isiNgisi lapho" inembile impela eNetherlands. Isifundo esivela ebusheni ngesiNgisi nezinye izilimi zase-Europe (iningi lamaJalimane kuya elincane isiFulentshi) senza amaDashi abe amanye ama-polyglots aqhakazile ezwekazini, futhi izwe lesibili elinobuchule kakhulu ezweni lesiNgisi lapho isiNgisi singekho isikhulu (ngemuva kweSweden; i-90% yabantu abakhuluma okungenani isiNgisi).
Ngokucabanga ngosayizi wayo omncane, leli lizwe lilethe isibalo esijabulisayo sabadwebi abaziwayo emhlabeni. Ubuciko nokudweba kwakhula ngekhulu le-17th, lapho i-Dutch Republic yayichuma kakhulu, kepha abaculi abadumile bake bahlala ezweni ngaphambi nangemva kwaleyo minyaka.
URembrandt, uJohannes Vermeer, uVincent van Gogh, uFrans Hals, uJan Steen, uJacob van Ruysdael, noPiet Mondriaan bangabambalwa nje abadwebi baseDashi abasebenza manje bahlobisa izindonga zeminyuziyamu emikhulu emhlabeni. Ngenhlanhla, eminye yale mizuzi esezingeni lomhlaba nayo ingatholakala eNetherlands. IMyuziyam Quarter eseAmsterdam ineRijksmuseum, iMnyuziyamu iVan Gogh kanye neStelelijk Museum eduze komunye nomunye, bobathathu benamaqoqo amahle kakhulu. IMnyuziyamu i-Boijmans Van Beuningen eRotterdam nayo iqoqo elikhulu lemidwebo, kufaka phakathi iRembrandt, uVan Gogh kanye namakhosi aphesheya.
IHorlller-Müller Museum itholakala kahle eHoge Veluwe National Park, iqoqo lesibili ngobukhulu emhlabeni iVan Gogh emhlabeni (ngemuva kweMnyuziyamu waseVan Gogh e-Amsterdam). Okungaphansi okugxilwe kubuciko beDashi, kepha ngeqoqo lesimanje eliyingqayizivele, iMnyuziyamu iVan Abbe e-Eindhoven. Amanye amadolobha aneminyuziyamu yezobuciko abalulekile ahlanganisa iGroningen neGroninger Museum, neHaarlem neFrans Hals Museum. IHermitage esisanda kusungulwa e-Amsterdam inawo wonke ubuhle bomsizi wayo omkhulu ku Saint Petersburg, ngokushintsha RussiaImibukiso -oriised ekubonisweni.
Isikhukhula esidabukisayo e-1916, izwe laqala iZuiderzee Works, umsebenzi omkhulu wokuphinda futhi unikeze amandla iZuiderzee unomphela. E-1930s, i-Afsluitdijk ekhangayo isiqediwe, eyaguqula ulwandle olungaphakathi ezweni lwaphenduka ichibi lamanzi elisha elibizwa nge-IJsselmeer. IZuiderzee Museum ese-Enkhuizen enhle inikelwe ngamagugu namasiko esifunda, kanye nomlando wasolwandle weZuiderzee.
Okunye ukubhujiswa okulimaza umhlaba wonke kuhlasele izwe e1953, kuqoshwa ukubulawa kwabantu kwe1,836 esifundazweni saseZeeland. Eminyakeni engamashumi amahlanu eyalandelayo, kwakhiwa iDelta Works eyenzelwe ukuvikela ingxenye eseningizimu-nentshonalanga yeNetherlands kwizikhukhula. Ingavakashelwa ezikhungweni ezahlukahlukene zabavakashi, okuphawuleka kunazo zonke yipaki yeNeeltje Jans eduze nase-Oosterscheldekering (Eastern Scheldt Storm Surge Barrier). I-American Society of Civil Injiniya iqaphele iZuiderzee Works kanye neDelta Works ngokubambisana njengenye yeZimangaliso Eziyisikhombisa Zomhlaba Wanamuhla.
ISinterklaas yisiko lamaholide asebusika asendimeni asagubha namuhla eNetherlands nakwamanye amazwe ambalwa. Usuku lokuzalwa kwakhe (ngo-December 6th) lugujwa minyaka yonke ngosuku lwase-Saint Nicholas '(December 5th). Njengoba lo mgubho uyindaba yomndeni, ithuba lincane lokubona lo mgubho njengomvakashi. ISinterklaas ngokwesiko ifika eNetherlands unyaka ngamunye maphakathi no-Novemba (imvamisa ngoMgqibelo) nge-steamboat evela Spain. ISinterklaasintocht (ukufika kwayo futhi idabule phakathi nedolobha) isesidlangalaleni futhi ihlelwe cishe yiwo wonke amadolobha. Ukusuka kokufika kwakhe kuze kube ngumgubho wakhe, ungahamba ungene eSinterklaas noma 'kuma-zwarte pieten' (abangabasizi bakhe) ezitolo ezinkulu.
Uma ufuna ukuzwa ingxenye yesiko lamaSinterklaas, inketho yakho enhle ukuhambela ukufika kweSinterklaas, ebizwa ngokuthi iSinterklaasintocht. Kukhona umgubho omkhulu edolobheni eliqokiwe ngosuku olugcwele phakathi kukaNovemba 10th kanye ne-16th, kanye nemikhosi emincane cishe kuwo wonke amadolobha ngosuku olulandelayo. Futhi cabanga ngokuthenga amaswidi weSinterklaas anjengokuthi: Pepernoten, Kruidnoten, taai-taai, izinhlamvu zemali ezi-chocolate noma izinhlamvu zama-chocolate. Uswidi uyatholakala ezitolo ezinkulu nasezitolo ezithengisa amaswidi kusuka ngoSepthemba kuze kube wesihlanu kuDisemba.
Omunye wemisebenzi edumile phakathi kwabantu bendawo ukuhamba ngamabhayisekili. Futhi ngesizathu - iNetherlands ine-22,000 km yemigwaqo ezinikezele ngamabhayisekili, ewela izwe lelo enabaningi babo ababaliwe. Kulula njengokuthola imephu, ukukhetha inombolo, bese uqala ukuhamba ngebhayisikile! Izindawo ezinhle ngokubukeka zilungele ukuhamba ngamabhayisekili kufaka phakathi iGreen Heart, iHoge Veluwe National Park, iSouth Limburg, kanye neSifunda Samanzi kanye neZaan. Vele wazi ukuthi imimoya ingaba namandla (ngenxa yamathafa ashubile), nokuthi ubusika bungabanda futhi bube nemvula.
Ugu lwamaDashi lulinganisa i-1,245 km yolwandle olusogwini olunamabhishi amaningi. Imisebenzi edumile ifaka ukubhukuda nokushiswa yilanga, kepha ikakhulukazi lezi zinqunyelwe ezinsukwini ezifudumele zasehlobo. Lindela iScheveningen ukuthi igcwale kakhulu lapho amazinga okushisa enyukela emazingeni akushisa kakhulu. Amabhishi anobungane kakhulu nomndeni ahlanganisa iZandvoort, Bloemendaal, Bergen, kanye neWest Frisian Islands.
Imidlalo yezamanzi ngomunye umsebenzi owenziwa kakhulu ngabantu bendawo. Amachibi angatholakala kuzo zonke izifundazwe, kepha amaFlakesan Lakes avelele, ikakhulukazi ngesikhathi seSiyeekweek yonyaka eqala isizini yezikebhe. Ukuhamba ngesikebhe kungenziwa ngaphandle kwelayisense inqobo nje uma isikebhe singasasebenzi kune-15m kanye / noma ngokushesha ukuthi i-20km / h. Ezinye izindawo ezigcwele ichibi kubandakanya iWijdemeren, Kaag, ne-Aalsmeer. Iningi lalawa machiba athule kakhulu, futhi ukuhambisa i-parasailing kanye ne-rafting akunakwenzeka.
Izitolo zivame ukuvulwa yi-9AM futhi zivame ukuvala nge-5: 30PM noma i-6PM. Izitolo eziningi zivalwa ngamaSonto, ngaphandle kwa- "koopzondag". Elithi “Koopzondag” lisho ingxenye enkulu noma zonke izitolo zivulekile. Ihluka edolobheni ngasedolobheni yiphi iSonto okuyi “koopzondag”. Emadolobheni amaningi kuba yiSonto lokugcina noma lokuqala enyangeni. Emadolobheni ambalwa (i-Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht noLeiden) izitolo zivulwa njalo ngamaSonto, ezimeni eziningi zivulwa kusukela ntambama kuze kube yi-5PM noma i-6PM. In Amsterdam indawo ye-centrum ihlukile, ngoba ungabona izitolo zivulekile kuze kube yi-9PM nangamaSonto kusukela ntambama kuze kube yi-6PM. Izitolo zingagcwele abantu abangena emadolobheni abavela ngaphandle kwedolobha. Kwezinye izindawo izitolo zivaliwe ngoMsombuluko.
Ngenxa yezizathu zokuphepha, ukusetshenziswa kwamakhadi esikweletu eNetherlands kudinga iphinikhodi. Ukusetshenziswa kwamakhadi esikweletu ngokuvamile kuvame kahle, kepha hhayi kakhulu e-US, UK noma eScandinavia. AmaDashi ngokwawo ahlala esebenzisa amakhadi asebhange endawo, okusho ukuthi amakhadi okudonswa kwemali ngaphandle kwelogo yeVisa noma ye-MasterCard lapho nezitolo ezincane nezimakethe zemakethe zivame ukuba nomshini. Ezindaweni ezivakashelwa izivakashi ngokuvamile uzothola amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi, kanye nasezitolo ezinkulu nasezitolo zokudlela ezweni lonke, kodwa cela kusengaphambili noma uhlole izithonjana ezivame ukukhonjiswa emnyango. Qaphela ukuthi iningi lezitolo ezinkulu zamukela kuphela amakhadi wedebithi endawo, hhayi amakhadi wesikweletu aphesheya. Abanye bane-ATM ezakhiweni lapho ungakhipha imali ngaphambi kokuyothenga.
Ama-ATM atholakala kalula, ikakhulukazi eduze kwezindawo zokuthenga kanye nezindawo zokulala ebusuku. Ezincane kunazo zonke azikhishwa, ngisho namadolobhana avame ukuba ne-ATM. Igama lesiDashi lale mishini yi- “pinautomaat”, kanti igama lesenzo elisho ukukhipha imali kuma-ATM nokukhokha ngekhadi lokudonswa kwemali (“pinpas”) lithi “pinnen”.
I-Netherlands indawo enhle yokuthenga izimbali. Ngaphandle kwama-florists, ungawathenga ngaphambi kokufakwa ezitolo ezinkulu.
Emadolobheni amaningi kunezitolo ezinkulu ezahlukahlukene kanti namanye amadolobha amakhulu anezindawo ezinkulu.
INetherlands idume ngezicathulo zayo zokhuni. Kodwa-ke, kulezi zinsuku cishe akekho, ngaphandle kwabalimi emaphandleni, bayazigqoka. Ubungahamba eNetherlands amasonto amaningi futhi uthole ukuthi akekho umuntu owasebenzisela izicathulo. Ukuphela kwendawo lapho uzobathola khona ezitolo zabavakashi nasezitolo ezinkulu zegadi. Ukugqoka izicathulo zokhuni emphakathini kuzokutholela ukubukeka okungajwayelekile okuvela kubantu bendawo.
Uma ungazama, "izicathulo zokhuni" ezidumile zikhululekile ngokumangazayo, futhi ziwusizo kakhulu kunoma yikuphi ukuhlelwa kwamakhaya. Cabanga ngabo njengezinyawo zonke zezinyawo; kulula ukuyibeka lapho uhamba engadini, insimu noma umgwaqo owubhuqu. Uma uhlala endaweni esemakhaya ekhaya, cabanga ngokuthatha i-pair yalezi uma ungakwazi. Isicathululo esihle sokhuni esihle sivikela unyawo lwakho ezintweni eziwayo zize zifike kuma-10 kg, ukuze ungezwa lutho. Izicucu ezenziwe ngokhuni zenziwe ngokhuni lwasemanzini noma ngesi-poplar. I-Willow ibiza kakhulu kune-poplar, ngoba izinkuni zinzima futhi zicindezelwe kakhulu. Lokhu kusho ukuthi isicathula sokhuni se-willow sinamandla futhi simelana nokugqokwa. Futhi afakwa insulin kangcono futhi ukumelana namanzi ngaphezulu.
Ukuze uthole izicathulo ezinhle zokhuni ezisezingeni eliphezulu; Gwema izitolo zabavakashi ze-kitschy ezitaladini zaseSchiphol nase Amsterdam's Damrak, futhi esikhundleni salokho funa abathengisi abajwayelekile (njengeWelkoop okuvame ukutholakala emadolobheni nasezindaweni ezisezindaweni zasemakhaya. Isifundazwe esisenyakatho yeFriesland sinezitolo eziningi ezithengisa izicathulo zokhuni, uvame ukuhlotshiswa ngemibala egqamile yefulegi laseFrisi.
INetherlands ayaziwa ngokudla okudlayo, kodwa imali ekhokhwayo yaseDashi enenhliziyo ingaba yinhle uma yenziwe kahle. Ezinye zalezi zokudla "ezijwayelekile zamaDashi" zinambitheka okwehlukile, kepha azithuthukisi ezikhethekile ezivela kwamanye amazwe. Isibonelo, ngenkathi ikhofi noshokhole waseDashi kungafakela imizwa yokukhumbula ekhaya ngokuxoshwa futhi kungabonakala njengokuthi "ukudla komphefumlo", ushokoledi omuhle waseBelgian kanye nekhofi ye-Italian (espresso, njll.) Kubhekwa njengokudla okumnandi. AmaDashi, noma kunjalo, ayaziwa ngobungcweti bawo nokudla okumnandi: Ukuthi udlani eNetherlands
Yini ongayiphuza eNetherlands
INetherlands inelinye 'lamanzi empompo' ahamba phambili emhlabeni. Ibhekwa futhi njengeyekhwalithi efanayo noma engcono kunamaminerali emvelo noma amanzi entwasahlobo futhi isatshalaliswa kuyo yonke indlu futhi ilawulwa 'ngabaphathi bamanzi'. Ukudla (kungaba kuthengwe esitolo noma kudliwe endaweni yokudlela) akumele kube yiphi inkinga. Uhlelo lokunakekelwa kwezempilo lucishe lufane nalo lonke elaseYurophu futhi amadolobha amaningi anezibhedlela lapho iningi labasebenzi likhuluma khona isiNgisi (okungenani bonke abasebenzi bezokwelapha). Ngokuvamile, kuyindaba yomqondo ovamile.
Amakhekhe e-Intanethi angatholakala emadolobheni amaningi; imvamisa zinikezela nangamadokodo okubiza aphesheya. Imitapo yolwazi eminingi inikeza ukufinyelela kwe-Intanethi. Ukufinyelela i-Intanethi okungenantambo usebenzisa i-Wi-Fi kuya ngokuya kudumile futhi kuyatholakala emahhotela amaningi, ezinkombeni, eziteshini naseSchiphol, kungaba mahhala, noma ngentengo yokuphanga ngokusebenzisa “amanethiwekhi” kazwelonke ezindawo eziyindawo enkulu.
I-Schokland Nezindawo Ezungezile
Umugqa Wezokuvikela we-Amsterdam
Indawo Engokomlando yeWillemstad, Inner City neTheku, eCuraçao
Inethiwekhi yezigidi eKinderdijk-Elshout
I-Ir.DF Woudagemaal (DF Wouda Steam Pumping Station)
I-Rietveld Schröderhuis (Indlu yeRietveld Schröder)
Indawo ye-Canal Ring engu-Seal Ten-Ten Century yase-Amsterdam ngaphakathi kwe-Singelgracht
Sesha futhi Qhathanisa Amathikithi Ebhanoyi
Hlela ihotela lakho nehhotela
Bhuka ukugibela kwakho iTekisi
Bhuka amathikithi wakho wama-e-museum, amapaki wezingqikithi nemisebenzi ukuze ungalindi emigqeni
Thenga izinto zakho zokuhamba ... nokuningi
Isaziso sobumfihlo se-GDPR
Silandele ukuze uthole amadili amasha
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa umuzwa wakho. Ngokuqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavumelana nalokhu, kepha ungaphuma uma ufisa. Funda imigomo nemibandela yethu yemfihlo ukuze uthole okuningi. Izilungiselelo zekhukhiTHUMELA